Fomba samihafa nanomezana ny tsindrimandry : Ny fahitana
" Tsy maintsy mirehareha aho, na dia tsy mahasoa aza izany ; fa handroso hilaza fahitana sy fanambaran’ny Tompo aho, tokony ho efatra ambin’ny folo taona lasa izay – na tao amin’ny tena, na tsy tao amin’ny tena, tsy fantatro, Andriamanitra mahalala – ilay anankiray dia nakarina ho any amin’ny lanitra fahatelo. " 2 Kor. 12:1,2
Koa satria matetika no anaovana fanadihadiana ny momba ny toe-tenako rehefa mahita fahitana aho hoe : rehefa hitan’Andriamanitra fa tonga ny fotoana mety hanomezana ny fahitana dia entina ho eo anatrehan’i Jesôsy sy ny anjely, ary tafasaraka tanteraka amin’ny zavatra momba ny tany. Tsy afaka mahita afa-tsy izay itondran’ny anjely ahy aho. Matetika no atodika amin’izay zava-mitranga eto an-tany ny fifantohan’ny saiko.
Indraindray, entina lavitra mankany aoriana any amin’ny hoavy, ary aseho ahy izay hitranga. Avy eo dia aseho ahy indray ireo zavatra efa nitranga tamin’ny lasa. Aorian’ilay fahitana, tsy tonga dia tadidiko avokoa ireo zavatra rehetra hitako, ary tsy dia mazava amiko loatra ny momba izany mandra-panoratro, avy eo dia mipoitra eo anoloako araka izay naseho ahy tao amin’ny fahitana ny zava-nitranga, ary dia afaka manoratra amin-kahalalahana aho.
Aorian’ny fahitana, indraindray miafina amiko ireo zavatra hitako ireo, tsy haiko averina ao an-tsaina ireo mandra-pahatongako eo anoloan’ilay toerana voalazan’ilay fahitana, ary dia miverina amin’ny fomba mahery vaika ao an-tsaiko ireo zavatra hitako tamin’ny fahitana. Miankina tanteraka amin’ny Fanahin’ny Tompo aho rehefa mitantara na manoratra ny fahitana, tahaka ny iankinako Aminy koa rehefa mahazo fahitana. Tsy haiko tadidiana ny zavatra naseho ahy tamin’ny fahitana raha tsy ny Tompo no mitondra azy ireny ho eo anoloako amin’izay fotoana tiany hitantarako na hanoratako azy.
Na dia miankina amin’ny Fanahin’ny Tompo aza aho rehefa manoratra ny fahitana azoko sy rehefa mandray azy ireny, ny teny ampiasaiko kosa, hamariparitako ny zavatra hitako, dia ahy manokana, raha tsy hoe angaha teny nambaran’ny anjely tamiko izany, izay ataoko anaty farango sosona mandrakariva.